“Masaajid la galay iyo Culimo la Waxyeelay ma jirto, Dawladduna waxay Raadsataa Dambiileyaasha” | Somaliland.Org
“Masaajid la galay iyo Culimo la Waxyeelay ma jirto, Dawladduna waxay Raadsataa Dambiileyaasha”
December 10, 2012	Laascaanood (Somaliland.Org)- Badhasaabka Gobolka Sool Maxamed Maxamuud Cali (Jeeni-yare) ayaa ka hadlay dil habeen hore magaaladaasi ka dhacay oo sida uu tilmaamay lagu khaarajiyay wiil dhalinyaro ah oo aan waxba galabsan.
Badhasaabka oo xalay khadka Telefoonka ugu waramayay Wargeyska DAWAN, ayaa sheegay in ciidammadda ammaanka ee magaaladda Laascaanood ay ku dabo jiraan wax uu ku sifeeyay arxan laaweyaashii dilay wiilkaasi dhalinyaradda ahaa, waxaanu yidhi “Waxaan idiin sheegayaa oo aan aad iyo aad uga xun nahay qoyskiisiina tacsi u diraynaa maamul gobol ahaan wiil dhalinyaro ah oo aan waxba galabsan oo xalay (habeen-hore) lagu dilay magaaladda Laascaanood. Waxaanay ciidammadda Booliska iyo kuwa baadhista oo bilaabeen hawl-galo baadhis qoto dheer ah oo ay ku dabo jiraan arxan laaweyaashii qudha ka jaray marxuumkaas dhintay oo magaciisu la odhan jiray Nuune oo ah nin dhalinyaro ah oo wanaagsan oo aan wax dambi ah lahayn.”
“Waxaanu ku rajo-weyn nahay In ILAAHAY noo bidh-bidhiyo oo Ciidammadda ammaanku ay gacanta ku soo dhigaan saacadaha soo socda gacan ku dhiigleyaashii marxuumkaasi dishay. Waxa kale oo aan beeninayaa war been ah oo ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta oo sheegayay in ciidammaddu ay masaajid kala baxeen dad tuhuno galeen. Waxaan idiin cadaynayaa inaanay jirin masaajid ciidammadda Boolisku galeen iyo culimo wax la yeelay midna,”
“Dawladdu culimadeeda ma waxyeelayso ee waxay raadsataa dambiileyaasha laynaya dadka rayidka ah ee masaakiinta ah. Waxaan ku rajo-weyn nahay inaanu gacanta ku soo dhigi doono dadkii dilay marxuumkaasi,”ayuu yidhi Mr.Jeeniyarre.
Badhasaabka Gobolka Sool Maxamed Maxamuud Cali (Jeeniyare) waxa uu dadweynaha ku dhaqan magaaladda Laascaanood ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamadda Booliska oo aanay qarinin wax uu ugu yeedhay mujrimiinta laynaya dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsanin.
Sidoo kale, dadweynaha ku dhaqan magaaladda Laascanaood ee xarunta gobolka Sool ayaa cambaareeyay oo ka xumaaday dilka wiilkaasi dhalinyaradda ah oo ay ku tilmaameen mid waxshinimo ah oo ay ka xumaadeen.
Previous PostCiidanka Ilaaladda Xeebaha Oo Qabtay Shidaal Kootarabaan Ah oo la keenay YemanNext PostMadaxweyne Siilaanyo Oo Komishanka U soo jeediyay inay soo saaraan natiijo saafi ah oo lagu qanco	Blog